स्वास्थ्य पेज » कोभिडका विरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक भन्छन्–‘कोभिड महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको ठूलो अवसर पनि हो ।’ कोभिडका विरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक भन्छन्–‘कोभिड महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको ठूलो अवसर पनि हो ।’ – स्वास्थ्य पेज
कोभिडका विरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक भन्छन्–‘कोभिड महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको ठूलो अवसर पनि हो ।’
कोभिड पछिको व्यस्त दैनिकी
विहान ६ देखि ६ः३० बजेसम्मको बीचमा उठ्छु । त्यसपछि अस्पताल परिसरमा ७ बजेसम्म ब्याटमिन्टन खेल्छु । कहिलेकाही ब्याटमिन्टन खेल्नु अघि आईसीयूमा जानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ८ बजेसम्म पनि व्याटमिन्टन खेल्छु । त्यसपछि क्वाटर जान्छु फ्रेस हुन्छु । खाना खाएर साढे ९ बजे अस्पताल प्रवेश गर्छु । सुरुमा आईसीयू, त्यसपछि इर्मेजन्सी, प्रि आइसोलेसन र आइसोलेसनका विरामीहरुको राउण्ड लिन्छु । त्यसपछि कोभिड आइसोलेसनमा जान्छु । त्यहाँका विरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिन्छु । सिप्यापमा राख्नु पर्ने छ की ? रेमडिसिभिर दिनु छ की ? प्लाज्मा नै दिनु पर्ने अवस्था पो छ की ? वा भेन्टिलेटरमै राख्नु पर्ने छ की ? स्टेशनबाट अवलोकन गर्छु । भित्रै जानु पर्ने अवस्था आए पीपीइ लगाएर जान्छु र कहिलेकाही घण्टौं समय त्यही विताउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
त्यसपछि ओटीमा जान्छु । करिव दुई बजेसम्म ओटीमा बसेपछि फेरी कोभिड आइसोलेसन वार्डमा जान्छु । विरामीको अवस्थादेखि उपकरणको बारेमा समेत जानकारी लिन्छु । कहिलेकाही ती उपकरणहरु चलाउने तवरतरिकाबारे अन्य स्टाफहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने पनि हुन्छ । त्यती गर्दा तीनचार बज्छ । एकछिन रेष्ट गर्छु । हिंजोआज त रेष्ट गर्ने फूर्सद पनि छैन् । गम्भीर खालका विरामीको संख्या धेरै भएकाले अधिकांश समय अस्पताल भित्रै हुन्छु । ७-८ बजे क्वाटर पुग्छु । खाना खाएर फेरी ९-१० बजे अस्पताल आउछु । इर्मेजन्सी, आईसीयू र कोभिड आइसोलेसन वार्डमा जान्छु ।
केही समस्या भए त्यसको सम्वोधन गरेर क्वाटर फर्किन्छु । राती प्राय कल आइराखेको हुन्छ । कलबाट समस्या समाधान हुने भए त्यसैअनुसार सिकाउने गर्छु । नत्र आफै राती उठेर आउँछु । कोभिडका सिकिस्त विरामी धेरै छन् । उनीहरुका लागि आउनै पर्छ । अर्कोतर्फ नयाँ डाक्टर साव र नर्सहरु आउनु भएको छ । केही नयाँ मेसिनहरु पनि आएका छन् । उहाँहरुलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ । अधिकांश समय मेरो अस्पतालमै वित्ने गरेको छ ।
कोभिडका विरामीलाई अक्सिजन थेरापी
कोरोना भाइरस संक्रमितहरु कोही श्वास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल भर्ना भएका हुन्छन् । कोहीमा भने रुघाखोकी, छातीको दुखाई लगायतका समस्या हुन्छ । हेर्दा ठिकठाक देखिन्छ । हिडडुल पनि गरकै हुन्छ । बोल्न पनि बोलिरहेकै हुन्छ । तर अक्सिजनको मात्रा घटिसकेको हुन्छ । यस्ता बिरामीमा अक्सिजनको मात्रा (स्याचुरेसन) ८० प्रतिशतभन्दा पनि कम भइसकेको हुन्छ । सामान्य अवस्थामा शरीरमा स्याचुरेसन ९५ देखि १०० प्रतिशत हुन्छ । स्याचुरेसन त्यो भन्दा कम भयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
कोभिड भएका व्यक्तिमा अक्सिजनको मात्रा घटिरहेको हुन्छ । अक्सिजन लगाउँदा पनि स्याचुरेसन बढिरहेको छैन र श्वासप्रश्वासको गति छिटो बढिरहेको छ भने यस्ता सिभियर लक्षण हुन् । कोभिडले गर्दा दुवैै फोक्सोमा निमोनिया भयो भने सिभियर कोभिडको लक्षण देखिन्छ । कोभिडको उपचारमा पनि हाई फ्लो अक्सिजन थेरापीमार्फत अक्सिजन दिने गरिन्छ । कोभिड–१९ को उपचारमा अक्सिजन थेरापी धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । अक्सिजन थेरापी दिने पनि २–३ वटा मोडालिटी छन् । माइल्ड अवस्थामा नाकबाट क्यानुला लगाएर अक्सिजन दिन सकिन्छ ।
यसको प्रयोगले अक्सिजनको स्याचुरेसन ९० प्रतिशतबाट बढाउन सकिएन भने फेस माक्सबाट अक्सिजन दिन थालिन्छ । यो विधिबाट पनि अक्सिजन सन्तुलिन राख्न सकिएन भने हाई–फ्लो अक्सिजन थेरापीमा जानुपर्ने हुन्छ । हाई फ्लो अक्सिजन थेरापीबाट प्रतिमिनेट ६० देखि ७० लिटरसम्म शतप्रतिशत अक्सिजन दिन सकिन्छ । अहिले आउने अधिकांश विरामी सिकिस्त हुनुहुन्छ । अहिलेपनि १२/१३ जनालाई अक्सिजन दिइरहेका छौं । चार जनालाई सिप्याप र हाई–फ्लो अक्सिजन दिइरहको छौ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति हो । १० जना सिकिस्त विरामीलाई हेर्नका लागि १० जना नै नर्सिङ स्टाफ आवश्यक पर्छ । अहिले कोभिड वार्डमा ५० बढी विरामी छन् । एउटा सिफ्टमा पाँचजना नर्सिङ स्टाफले हेर्दै आउनुभएको छ । यो भनेको एउटा नर्सले १० जना विरामी हेर्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा नर्सिङ स्टाफको भ्याकेन्सी खोल्यो । र, उहाँहरु नियुक्त भएर आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई बस्ने ठाउँको अभाव देख्छु । चिकित्सकहरु आउनु भएको छ क्वाटरको अभाव छ ।
भत्ता दिएरमात्र हुने होइन् उनीहरुको मनोवल बढाउने र काममा सहजता ल्याउने कुरापनि महत्वपूर्ण हो । जनशक्ति पठाएरमात्र भएन त्यसको व्यवस्थापनलाई पनि ख्याल गरिनु पर्छ । नत्र त्यसको प्रभाव उपचारमा पर्छ । डिउटी गरेर बस्ने ठाउँ भएन भने काम गर्न कहाँ मन लाग्छ ? अर्को भनेको उपकरण अभाव हो । अहिले पनि १२/१३ जना विरामीलाई आईसीयूमै राख्नु पर्ने अवस्था छ । तर हामीसँग ८ वटा मात्र आइसीयू वेड छन् । आईसीयूमा राख्नु पर्ने विरामीलाई वार्डमा राखेका छौं । तर उनीहरुलाई आईसीयूकै बराबरले केयर गरेर उपचार गरिरहेका छौं । कोभिडमा २ वटा भेन्टिलेटरको मात्रै छन् । त्यो निकै कम हो । ननकोभिडको भेन्टिलेटर यहाँ प्रयोग गर्न मिल्दैन् । फेरी त्यही पनि भेन्टिलेटरमा राख्ने ननकोभिडका विरामी आइरहेका छन् ।
अहिलेपनि दुई तीन जना भेन्टिलेटरमा छन् । कोभिडका सिकिस्त विरामी राख्ने वार्ड नै फरक हुनु पर्छ । जस्लाई अक्सिजन दिएर भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता विरामीबाट भाइरस धेरै निस्कन्छ । त्यसरी निस्केको भाइरसलाई बाहिर फिल्टर गरेर पठाउनु पर्छ । त्यस्तो संरचना हामीसँग छैन् । अर्को त्यही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कोभिडका विरामी भएको ठाउँलाई कम जोखिमयुक्त गराउनु पर्छ । कोभिडका गम्भीर विरामीबाट अन्यलाई संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले त्यही खालका संरचना बनाउनु पर्छ । त्यो अहिले नेपालका तीन ठाउँमा मात्र छ ।
महंगो छ तर कोभिडको लागि अत्यन्तै जरुरी पनि छ । कोभिड रोगै नयाँ भएकाले नयाँ–नयाँ उपकरणको प्रयोग भइरहेको छ । अहिले हामीसँग २ वटा ‘हाई फ्लो अक्सिजन नेजल क्यानुला’ छ । त्यो काठमाडौंको भेन्टिलेटर बैंकबाट आएको हो । गम्भीर विरामी आउनेहरुको संख्या प्रक्षेपण गर्दा अवको दुई तीन महिनामा कम्तिमा पनि २० देखि २५ वटा ‘हाई फ्लो अक्सिजन नेजल क्यानुला’ आवश्यक देखिन्छ । अर्को स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि चाहिने सामाग्रीको पनि अभाव छ । विरामीको संख्या बढ्ने वित्तिकै पीपीईको अभाव हुन्छ । एकैदिन दुई तीन सय पीपीई सकिन्छ । गम्भीर खालका संक्रमित उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि भाइरसको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसका लागि पुरै हेड छोप्ने हुट चाहिन्छ । त्यो लगाएर उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम कम हुन्छ । त्यसको पनि अभाव छ । हामीसँग अहिले दुईवटा हुट छ । त्यो पनि एउटा संस्थाबाट मागेर ल्याएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर
कोरोना भाइरस महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन् । अवको योजना दुई बर्षका लागि बनाउनु पर्छ झै लाग्छ । खजुरामा कोभिड विशेष अस्पताल हुँदा हामीले तीन महिनाको योजना बनाएर काम गर्यौं । त्यतिबेलै मलाई कम्तिमा ६ महिनाको योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लागेको थियो । तर भएन् । भेरी अस्पतालबाटै अहिले कोभिड अस्पताल संचालनमा छ । कोभिड महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अवसर पनि दिएको छ । यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि यो ठूलो अवसरका रुपमा लिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मेनपावरसहित ५० बेड क्षमताको आईसीयू वेड बनाउनु पर्छ । कोभिड सकिएला नसकिएला तर त्यसो गरियो भने त्यो सधैंका लागि हुन्छ । किनकी भेरी अस्पताल रेफरल अस्पताल पनि हो । जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । उपचारमा खटिनेहरुको स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा चुनौती दीर्घकालिनरुपमा समाधान गरिनु पर्छ । स्थायी संरचना निर्माण गरेर भाइरस विरुद्ध लड्ने दीर्घकालिन योजना बनाउनुको विकल्प छैन । योजनामात्र होइन त्यस्लाई कार्यान्वयन समेत गरियो भने यस्ता महामारीसँग जुध्न ठूलो सहजता मिल्ने छ ।
(भेरी अस्पताल नेपालगन्जका एनस्थेसियोलोजिष्ट डा पारश पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)